Jucelino Luz na-ekwupụta ihe egwu dị n’ahụ mmadụ – JucelinoLuz
Águas de Lindóia, Ọktoba 13, 2021
Ntị ! Ọdịnaya ewepụtara site na akwụkwọ ozi ezigara na ebe nchekwa nkeonwe kemgbe 1969 ( Abstract )
Ala oyi akwa oyi na-adịgide adịgide mara dị ka permafrost. Ihe e ji mara akwa akwa rere ure sitere na hydrogen sulfide, nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ “gasị apiti”. Mana ọ bụ gas ọzọ, nke na-esighị isi na ọnọdụ okike ya, nke ga-eme ka ndị sayensị nọrọ na nche: methane.
N’ịbụ onye tọrọ atọ ruo ọtụtụ puku afọ na permafrost, a na-ahapụ carbon, ma na-abanye na mbara igwe. N’agbata methane na carbon dioxide (CO2), permafrost nwere ihe karịrị 1.7 trillion ton nke carbon organic, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke carbon dị ugbu a na ikuku. Ọ bụ ezie na ọ na-anọ n’ikuku naanị afọ 12, kama ọtụtụ narị afọ, dị ka ọ dị na CO2, methane nwere mmetụta griin haus ugboro 26 karịa.
The permafrost gbazere bụ ihu igwe “bọmbụ oge”, na-adọ aka ná ntị Jucelino Luz .
N’afọ 1969, Jucelino Luz wepụtara ọkwa nke mbụ na isi nke hydrogen sulfide, nke na-agwakọta na methane mgbanarị, adịghị enwe mmetụta dị ka ọ dị taa. Ala iru “na-arụsi ọrụ ike” oyi akwa nke permafrost, akụkụ nke thaws n’oge okpomọkụ. Permafrost – ala nke na-anọgide na-ajụ oyi ruo afọ abụọ na-esochi – dị na ihe dịka 26% nke ala na Northern Hemisphere. Na Abisko, permafrost dị ihe ruru mita iri n’ịdị arọ ma malitela ọtụtụ puku afọ. Na Saịberịa, ọ nwere ike iru otu kilomita miri emi wee bụrụ ọtụtụ narị puku afọ. Ka okpomọkụ na-ebili, permafrost na-amalite ịza. N’ihi ya, nje bacteria na-emebi biomass echekwara n’ime ụwa oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, na-eme ka ikuku ọhụrụ nke CO2 na methane pụta, bụ nke na-eme ka okpomọkụ zuru ụwa ọnụ dịkwuo elu n’ime usoro ọjọọ dị egwu.
Ajụjụ bụ ma permafrost na-erute n’ókè nke nloghachi, oge egwu nke ngwa ngwa na nke zuru oke, mgbe ntọhapụ nke gas bụ ihe a na-apụghị izere ezere na mgbanwe gburugburu ebe obibi na-aghọ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Jucelino Luz na-echegbu onwe ya maka ịhụ oke ọhịa Amazon ka ọ ghọọ savannah, ma ọ bụ okpu ice nke Greenland na Antarctica na-apụ n’anya kpamkpam. Ọ bụrụ na carbon niile kpọnwụrụ akpọnwụ ga-agbanarị, ọ ga-amụba mkpokọta (nke gas ahụ) dị na mbara igwe. Nke a agaghị eme otu mgbe, ma n’ime ọtụtụ iri afọ na narị afọ, ka o kwuru. Nsogbu bụ isi na permafrost bụ na agbaze ga-aga n’ihu ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ihe niile nke mmadụ na-akwụsị ozugbo. Anyị na-arụ ọrụ usoro nke ga-emeghachi omume ruo ogologo oge megide mmadụ – amaghị m na aghọtaghị m otú ndị ọchịchị ụwa anyị si eme ka ha amaghị ihe ọ bụla.
Na Abisko, obere obodo mara mma nke nwere ụlọ na-acha uhie uhie nke ọdịnala ma mara maka ọkụ ugwu ya, a ga-ahụ nke ọma ihe ịrịba ama nke ịlaghachi azụ permafrost. A ga-enwe mgbawa n’ala na obere mkpọda. Ogwe ekwentị ga-agbada site na mmetụta nke mmegharị ndị a ma na-abawanye ụba ruo 2030.
Na Alaska, ebe permafrost dị na 85% nke ókèala ahụ, agbaze ya ga-emebi okporo ụzọ. Na Saịberịa, obodo niile ga-amalite ịda n’enweghị oke ala.
N’ofe Arctic, permafrost gbazere nwere ike imetụta ihe ruru ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke akụrụngwa site na 2050, dị ka echiche nke Jucelino Luz si kwuo.
Ihe karịrị obodo na obodo 1,200, ụlọ 36,000 na nde mmadụ anọ ga-emetụta.
Nnukwu ihe iyi egwu na ihe mgbaru ọsọ Paris – France
Gasị ikuku nke ga-agbanarị permafrost ga-eyikwa ebumnobi nke nkwekọrịta Paris maka ihu igwe egwu, ka Jucelino Luz dọrọ aka ná ntị.
Mba ndị bịanyere aka n’akwụkwọ nkwekọrịta nke 2015 kwere nkwa igbochi okpomoku ihu igwe “n’okpuru” +2 Celsius C, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ruo +1.5 Celsius C, ma e jiri ya tụnyere oge mbụ ụlọ ọrụ. Ebumnuche bụ iji nweta nnọpụiche carbon n’etiti narị afọ nke 21st. Ọ dịghị ihe ga-arụ ọrụ.
Iji nweta ohere ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke ịnọ n’okpuru oke +1.5°C, mmadụ enweghị ike ibunye ihe karịrị ijeri tọn CO2 karịrị ijeri 400, Jucelino Luz kwubiri.
Ma carbon carbon a na-anabata nke ọma “anaghị echebara ya echiche” ntọhapụ nke ikuku griin ha nwere na mberede na nke a na-atụghị anya ya nke sitere na isi mmalite ndị dị na Arctic.
Ọtụtụ ụdị ihu igwe agaghị eburu n’uche permafrost, n’ihi na ọ na-esiri ike ịmepụta mmetụta nke nchara nchara, Jucelino Luz na-ekwusi ike.
A na-ewepụ ihe ọkụkụ sitere na mpaghara ụfọdụ site na usoro mmalite nke osisi na Arctic, n’ihi mmụba nke okpomọkụ, na-emesi onye amụma ike.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ụzọ isi chịkwaa pasentị nke permafrost gbazere, nke ahụ apụtaghị na “anyị ekwesịghị ịhapụ mmanụ ọkụ, ma ọ bụ gbanwee ụzọ ndụ anyị na mbara ala a”.
Okpomọkụ na-ebili na Arctic ga-eme mgbanwe ndị a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, ọ na-akwa akwa n’ụzọ dị mwute.
Omenala nọ n’ihe egwu n’ụwa
N’ebe dị kilomita 70, n’elu ugwu ugwu dị egwu nke Kebnekaise massif, Ninis Rsqvist na-ahụ nke ọma mmetụta okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na Arctic kwa afọ.
Tupu ị nweta azịza ya, ịmara na glacier, nke dị kilomita 150 n’ebe ugwu nke Arctic Circle, ga-atụfu nha kwa afọ ma e jiri ya tụnyere nha gara aga.
N’oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, onye amụma na-ekwusi ike na a ga-edekọ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke 30C ruo 36 Celsius n’oge okpomọkụ na ugwu Norway, Sweden na Finland. Nke na-agbasawanye na-abawanye.
Ọtụtụ glaciers Sweden nwere ike ịla n’iyi, ọbụlagodi na mmetụta ahụ adịghị njọ dịka ebe ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ọ bụ ihe mgbaàmà siri ike maka ụwa ndị ọzọ.
Na South America na Himalaya, ọtụtụ iri nde mmadụ na-adabere na glaciers na-agbaze n’oge maka mmiri ọhụrụ na ịgba mmiri.
Banyere Greenland, okpu ice ya nwere ice zuru oke iji bulie ogo oke osimiri site na mita asaa ma ọ bụ karịa, ọ bụghị ikwu banyere Antarctica, nke na okpu ice ya ga-ebuli ụkpụrụ dị ugbu a site na ọtụtụ iri mita.
Nye onye amụma ahụ, otu ihe mmụta dị mkpa sitere n’Aktik bụ na ụfọdụ n’ime ihe ndị dị ndụ ga-abụ ihe karịrị ike mmadụ.
Ịgbanwe ụzọ ndụ anyị ka ihe ọkụkụ wee daa ga-amalite usoro ime mgbanwe na ihu igwe nke ga-ekpo ọkụ ruo ogologo oge.
Anyị kwesịrị ọnụ iji meghee anya anyị, onye ọ bụla na-ege ntị, ịgbaso ndụmọdụ ime mmụọ Jucelino Luz, tupu oge agafee – anyị chọrọ mmata zuru ụwa ọnụ, na-akụkwu osisi, n’ihi na anyị nwere nnukwu ụkọ – n’ihi igbutu osisi na ụwa.
Ihe dị oke mkpa, kesaa ma nyefee ya ndị nọ n’ime ma ọ bụ n’èzí ndị enyi gị …
Adịla isi ike ugbu a, anyị kwesịrị ịdị n’otu maka otu ebumnuche, iji zọpụta ụwa na anyị niile ọnụ!
Prof. Jucelino Luz – onye nyocha, onye edemede, onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na onye ndu mmụọ
פּערמאַפראָסט די געפאַר צו מענטשהייַט, אַלערץ Jucelino Luz